AMISOM oo gacanta ku dhigtay Tiro ka tirsan Maleeshiyadda Alshabaab – idalenews.com
AMISOM oo gacanta ku dhigtay Tiro ka tirsan Maleeshiyadda Alshabaab
Taliyaha Ciiddamadda Uganda ee qeybta ka ah Hawlgalka AMISOM, Brigadier General Michael Ondoga, ayaa sheegaya inay Ciiddamadiisu gacanta ku dhigeen 52-qof oo lagu Tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin Kooxda Meylka adag ee Alshabaab.
Taliyaha oo Waraysi siiyay Wargeyska The Daily Monitor ee ka soo baxa Dalka Uganda, ayaa sheegay inay Hawlgal ay sameeyeen Ciiddamadad Afartii bilood ee ugu horeysay Bishan ay ku soo qabteen 52 ka tirsan Kooxda Alshabaab.
Sidoo kale, Warbixin ay Ciiddamadda Difaaca Uganda (UPDF), soo saareen Todobaadkii hore ayee ku sheegeen inay dileen 23-Dagaalyahaan, kuwaasi oo ay ku jireen Taliyayaal muhiim ah oo ka tirsanaa Maleeshiyadda Alshabaab.
Warbixinta waxaa kaloo lagu xusay inay Ciiddamadda gacanta ku dhigeen 52-Xubnood oo Kooxda Alshabaab ka taageeri jiray dhinaca Canshuur aruurinta iyo Wardoonka, kuwaasi oo la xusay inay isku soo dhiibeen Ciiddamadda Ugandha.
Maleeshiyadda Alshabaab ayaa waxaa dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay laga qabsaday deegaano muhiim ah oo ku yaalla Goboladda Sh/Hoose iyo Sh/Dhexe, iyadoo Kooxda Alshabaab Deegaanadaasi ka heli jirtay Dhaqaale xoogan oo ay ku socodsiiyaan Falalka Qaraxyadda ay la beegsadaan Goobaha ay Ciiddamadda Dowladda iyo kuwa AMIOSM joogan.
Xigasho:- The Daily Monitor
Dowladda Somalia iyo Shirkado Caalami ah oo lagu wado inay kala saxiixdaan heshiis shidaal baaris
Wasiirka Gaashaandhiga Somaliya oo sheegay inay diirada saarayaan ciribtirka Ajaaniibta, ka dhinac dagaalameysa Shabaab